လူမှုထူးချွန်ဆုရ နော်ဆူဇန်လှလှစိုးနဲ့ မေးမြန်းချက်
တိုက်ရိုက်နားဆင်ရန် နံနက် ၆း၀၀-၆း၃၀တိုက်ရိုက်နားဆင်ရန် နံနက် ၆း၃၀-၇း၀၀တိုက်ရိုက်နားဆင်ရန် ညနေ ၆း၃၀-၇း၀၀တိုက်ရိုက်နားဆင်ရန် ည ၉း၀၀-၁၀း၀၀ နံနက် ၆း၀၀-၆း၃၀နံနက် ၆း၃၀-၇း၀၀ညနေ ၆း၃၀-၇း၀၀ညပိုင်း ၉း၀၀-၁၀း၀၀ ယခင်အစီအစဉ်ဟောင်းများပေါ့ဒ်ကတ်စ်မိုဘိုင်းလ် ဗွီအိုအေမြန်မာ - YouTube နေ့စဉ် တီဗွီသတင်းလွှာအပတ်စဉ် တီဗွီသတင်းလွှာဗွီဒီယိုသတင်း သုတအဖြာဖြာ / အမျိုးသမီးကဏ္ဍ
အမေရိကန်အခြေစိုက် Inter Action အဖွဲ့အစည်းကြီးကနေပြီးတော့ နှစ်စဉ် လူမှုရေး ထူးချွန်ဆုတွေကို ဧပြီလကုန်ပိုင်းမှာ ချီးမြှင့်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒီနှစ် ဆုရရှိတဲ့ ဆုရှင်တွေထဲမှာ ကရင်အမျိုးသမီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့ KWAG ကို ဦးဆောင်တဲ့ နော်ဆူဇန်လှလှစိုး လည်း ပါဝင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကလေးငယ်များနဲ့ အမျိုးသမီးအရေး၊ ဒုက္ခသည်များအရေးတွေကို ဆောင်ရွက်နေတဲ့ နော်ဆူဇန်လှလှစိုး အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကို ရောက်နေစဉ်မှာ ဒေါ်လှလှသန်း က မေးမြန်းပြီးတော့ ဒီသီတင်းပတ် အမျိုးသမီးကဏ္ဍမှာ တင်ဆက်ထားပါတယ်။
This forum has been closed. Comments There are no comments in this forum. Be first and add one တခြား ဖတ်စရာများ Harry Potter မင်းသမီးလေး Emma Watson ရဲ့ ကျော်ကြားတဲ့မိန့်ခွန်း ၂၀၁၄ နိုဘဲလ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင် Malala အကြောင်း တစေ့တစောင်း Clock စကားလုံးဆိုင်ရာ အီဒီယံအသုံးအနှုန်းများ အမေရိကန် လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး Russel နေပြည်တော် သွားမည် မကျေနပ်မှုကိုဖေါ်ညွှန်းတဲ့ အီဒီယံများ More Articles နေ့စဉ်တီဗွီသတင်းလွှာ (၁၀-၂၄-၂၀၁၄)
နယူးယောက်မြို့မှာ အီဘိုလာရောဂါ ပထမဆုံးကူးစက်ခံရသူတယောက် တွေ့ရှိခဲ့တဲ့အကြောင်း၊ ကနေဒါနိုင်ငံ Ottawa မြို့တော်မှာ တိုက်ခိုက်ခဲ့သူဟာ တကိုယ်တော် လုပ်ဆောင်ခဲ့တာ ဖြစ်တယ်လို့ ရဲကပြောလိုက်တဲ့အကြောင်း၊ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ လူသတ်မှုနဲ့ စွပ်စွဲခံထားရသူ မြန်မာနိုင်ငံသား ၂ ဦးကို မိသားစုက သွားရောက် တွေ့ဆုံတဲ့အကြောင်း စသဖြင့် …. ထိပ်တန်းသတင်းများ စာရေးဆရာကြီး ဦးအောင်သင်း ကွယ်လွန် ဟောင်ကောင် လူထု ဆန္ဒ္ဒခံယူဖို့ စီစဉ် မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ နျူကလီယား အရေး ဆွေးနွေးဖို့ ကန်လိုလား အီဘိုလာ အကူးစက်ခံရသူ ကန် သူနာပြုတွေ ပျောက်ကင်းပြီ သတင်းထောက် ကိုပါကြီး သေဆုံးရမှု သူတို့ အမြင် ISIS ကို ဆီးရီးယား အတိုက်အခံ Kurds နဲ့ ပေါင်း တိုက်မည် အများဆုံးဖတ်ရှုသည့် သတင်းများ သတင်းထောက် ကိုပါကြီး သေဆုံးရမှု သူတို့ အမြင် ISIS ကို ဆီးရီးယား အတိုက်အခံ Kurds နဲ့ ပေါင်း တိုက်မည် ထိုင်း နိုင်ငံရေးကြောင့် Cobra Gold အဆင့်လျှော့ အီဘိုလာ အကူးစက်ခံရသူ ကန် သူနာပြုတွေ ပျောက်ကင်းပြီ Harry Potter မင်းသမီးလေး Emma Watson ရဲ့ ကျော်ကြားတဲ့မိန့်ခွန်းအများဆုံးအီးမေးပို့သည့် သတင်းများNo itemsအများဆုံးကြည့်ရှုသည့် ဗွီဒီယိုသတင်းများJean-Claude Duvalier Mande Padon ak Rekonsilyasyon Nan Peyi Dayiti မတူတာလေးတွေ နေ့စဉ်သတင်းလွှာ (၁၀-၂၄-၂၀၁၄) ကမ္ဘာ့သတင်း စက္ကန့် ၆၀ ထူးခြားဆန်းပြား